I-China photo efakwe i-pins ifektri nabakhiqizi | Kingtai
Kungani Izithombe Eziqoshwe Izikhonkwane?Kuyisinqumo esingcono kakhulu ukwenza isithombe izikhonkwane eziqoshiwe uma ufuna izikhonkwane ze-lapel ezingasindi ezinemininingwane ecacile.
Ihluke kwizikhonkwane ze-Cloisonne, ezibunjiwe, izikhonkwane ze-Lapel eziqoshiwe ziqopha umklamo ngokuqondile endaweni yensimbi ngaphandle kokubunjwa kwe-ridge nesigodi.
Lokhu kwandisa inani lemininingwane engaboniswa umklamo. Siqala ukusebenzisa izinto ezithuthukisiwe ezilawulwa ngekhompiyutha ukuze sinamathisele isisekelo sensimbi somklamo wakho.
Bese sigcwalisa umbala ozikhethele bese sishisa izikhonkwane kuhhavini ukuze silungise uqweqwe lwawo futhi siqinisekise ukuqina.
Okokugcina, izikhonkwane zethu ezipholishiwe nokusebenzisa i-epoxy evikelayo kuqedwe ngokucacile ukuze kwengeze ukuqina okwengeziwe nokuvikela izikhonkwane zakho zangokwezifiso. Ake sikubonise ukuthi zinhle kangakanani izikhonkwane zethu zokushumeka izithombe ezingasindi!
I-Photolithography noma i-photochemical processing (PCM) iyinqubo yokugaya amakhemikhali. Le nqubo ingakhiqiza ubuciko obuhle kakhulu nokunemba okuhle kakhulu.
Uma kuqhathaniswa nokubhoboza, ukubhoboza, ukusika i-laser noma ijethi yamanzi, i-lithography iyindlela engabizi kakhulu. Inqubo ichaza lezi zinyathelo ezilandelayo: iphinikhodi, ngokuvamile ithusi noma ithusi, inesithombe sefilimu esincanyana esidluliselwe kuso, i-photoresist, i-photorensitive material eboshwe eduze kwephrojekthi yakho yokuklama. Ukukhanya kwe-UV kuzoqinisa i-photoresist.
Izingxenye ezingavikelekile zibe sezigcotshwa ngesisombululo se-asidi. Ngokushesha umklamo wawonakele. Ama-asidi asele nokungcola kuyasuswa ukuze kutholwe umkhiqizo onembile.
Izimbobo eziqoshiwe zigcwaliswa ngopende we-koqweqwe lwawo, eyodwa ngesikhathi. Lokhu kwenziwa ngesirinji. Lo mkhiqizo wenziwa kuhhavini.
Ibe isisikwa ibe izinaliti ngazinye bese ipholishwa. Kuleli qophelo, ungakhetha ukwengeza i-epoxy coating ukuvimbela ukuguga.
Izinzuzo zezinaliti ze-photolithography izikhonkwane ze-photolithography zilungele imiklamo eyinkimbinkimbi kakhulu (ayikho izithunzi noma ama-gradients).
Banikeza nezinhlobonhlobo zemibala ongakhetha kuzo. I-photoresist eyengeziwe ilula kunezinye izinhlobo zamaphini ngoba enziwe aba mncane.
Lokhu kungaba inzuzo enkulu yokuklama iphinikhodi! Noma, uma ufuna ukwengeza izithunzi noma ama-gradient ekwakhiweni kwakho, sincoma ukuthi ubheke izikhonkwane zokuphrinta kwe-offset.
Uma iphinikhodi yokubhala isithombe ikufanele, ngakho-ke sikumema ukuthi usinikeze umklamo wakho! Sinikeza amakhotheshini mahhala kuyo yonke imikhiqizo yethu.
Okwedlule: Ibheji Lezempi
Olandelayo: Iphinikhodi ye-lapel ye-Rhinestone